........HIGH WAY UP !: နေရောင်လင်.ပန်း
ကြားနေကျအသံပါ...မထင်မှတ်ဘဲ..လမ်းချိုးအကွေ.လေးမှာဆုံမိလေပြီ။ သူ.နံမည်ကတော. ကိုလှထွေး
သူမူးလာပြီဆိုလျှင် 'လှပြီးမှထွေးတဲ.လှထွေး' ဟူ၍လည်းအော်လေ.ရှိလေသည် ။ တစ်စတစ်စယိုယွင်းလာသော
ကြောင်.တစ်ဖုံခုတော. အစုံအစုံနဲ.ကစော်ဘုံကိုနေ.တိုင်းသွားတတ်နေလေပြီ ။ ဤလူသည် ဘုန်းကြီးလူထွက်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သောကြောင်.
ဘုရားဝတ်ရွတ်စဉ်များကိုလည်း မူးလာက အော်ရွတ်လေ.ရှိလေသည် ။
" ဟေ.မောင်မျိုး..." " ဗျာ..ဦးလေးဦးလှထွေး..ဘယ်လိုလဲ..ကောင်းလာပြီပေါ."
"အေး ပြောကွာ...များများပြော..ငါ.အိမ်ရောက်လည်း တစ်ယောက်တည်းဆိုတော. "
"ဦးလှထွေးမှာ..ခုမိတ်ဆွေစစ်တစ်ယောက် ( ကျွန်တော် ) ရှိတယ်လေ...ကဲကျွန်တော်လည်း ခုလိုဦးလှထွေးရဲ.အခြေအနေကိုရောက်သွားပါပြီတဲ.
သူ.နေရာမှာသင်ဝင်ခံစားကြည်.ပေးပါ..ကျွန်တော်ကတော.ရိုးသားစွာဝန်ခံပါမည်..တစ်ခြားဆုံးရှုံးမှုများ မပါသေးဘဲ..ဘာမှမရှိတဲ.အိမ်တစ်အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေဖို.ကိုပင် ကျွန်တော်မခံစားနိုင်ပါ..။
ewhainnshwe June 29, 2010 at 8:53 PM
အင်း . . . ဟုတ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိနေပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ ငါ့မှာ မိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာရှိရဲ့လားလို့တွေးမိပြီး အားငယ်သလိုဖြစ်မိတယ်။ အရေးရှိရင် ပြေးကြည့်စရာ မိတ်ဆွေစစ်လေးတစ်ယောက်လောက်တော့လိုချင်ပါရဲ့ ခုထိတော့ ရှိမရှိမသေချာသေးဘူး။ (စိတ်မကောင်းစရာပဲ)
Aung Myo Thu June 30, 2010 at 7:32 PM
Yes.It's hard to define and get true friend.But I'm sure you have at least one that's me :)
drhtz February 25, 2014 at 8:15 PM
Dr.Hnin Thazin February 25, 2014 at 8:16 PM
Dr.Hnin Thazin February 25, 2014 at 8:17 PM
your writing really moves me, Sayar. I want to be such kinda genuine friend to anyone first and I am sure that I will get one back. Whatever, I will beatrue friend to people near me than before. Thank you, Sayar.
Can I haveachance to share this post in Facebook with credit to you, Sayar?
Aung Myo Thu February 25, 2014 at 9:00 PM
Of course, you can share anything you like from my blog. I'm very glad to know you like this one and it also moves you. We've become true friends after you've read this, have we? :)